Arsenal Oo Booska Champions League Ee Man City La Wareegi Karta-Gunners Oo Fursad Labaad Heshay. - Gool24.Net
Arsenal Oo Booska Champions League Ee Man City La Wareegi Karta-Gunners Oo Fursad Labaad Heshay.
Arsenal ayaa ku fashilantay in ay xili ciyaareedkan ku dhamaysato afarta kaalmood ee Premier League ugu sareeya waxayna gashay kaalinta shanaad.
Arsenal ayaa sidaa ku seegtay in ay u soo baxdo UEFA Champions League laakiin waxay wali haysataa laba fursadood oo kale oo mid ka mid ahi ay gacmahooda ku jirto taas oo ah in ay Europa League ku guulaystaan.
Laakiin xataa haddii ay Arsenal ku fashilanto in ay Chelsea ku garaacdo finalka Europa League, wali waxaa jirta fursad labaad oo ay ugu soo bixi karto Champions league taas oo ah mid ay booska Manchester City ee Champions League kula wareegi karto.
Iyada oo xidhiidhka kubbada cagta Yurub ee UEFA uu wali baadhitaan ku hayo Man City ayay warar soo baxay sheegayaan in kooxda Etihad Stadium ka dhisan laga mamnuuci doono kubbada cagta Yurub ee Champions League.
Sida lagu daabacay majalada dalka Germany ee Der Spiegel, City maamulka kooxda Man City ayaa ka been sheegay lacag dhan £70 milyan gini oo ay ka heleen Abu Dhabi United Group oo ay leeyihiin qoyska maamula Abu Dhabi isla markaana mulkiyada City iska leh.
Lacagtan ayaa lagu cadeeyay in ay tahay mid gabi ahaanba ka soo horjeeda sharciga dhaqaale wanaaga kooxaha Yurub iyada oo la sheegay in madax waynaha UEFA ee Aleksander Ceferin iyo maamulkiisu ay talaabo adag qaadi karaan.
Laakiin hadda waxaa jira walwal badan oo laga qabo in xidhiidhka kubbada cagta Yurub ee UEFA uu talaabo adag ka qaadi doono Man City iyada oo lagu ciqaabi karo in laga saaro Champions League taas oo kooxda Emery siin karta fursad labaad oo ay tartankan ugu soo bixi karaan.
Laakiin haddii ay Arsenal ku guulaysato Europa League ayayna u baahan doonin booska Man City xataa haddii tartankan laga reebo balse Guardiola iyo kooxdiisa City ayaa hadda ka walwalsan go’aanka ay UEFA qaadan doonto.
Baadhitaanka Man City ayaa ka bilawday sirihii uu fashiliyay Football Leaks kuwaas oo soo bandhigay cadaymo buuxa oo muujinaya in maamulka Man City ay ka been abuureen xisaabaadka kooxooda oo ay samaysteen qandaraasyo ay la galeen shirkado iyagu ay leeyihiin ama ay xataa lacagta wadankooda ku bixiyeen.